MAHAFANTATRA FIHETSIKA MANJAKAZAKA AMIN'NY ALIKA - ALIKA
Mahafantatra fihetsika manjakazaka amin'ny alika
Lisitry ny fitondran-tena manjaka izay mety hitranga amin'ny alika (mbola tsy feno ity lisitra ity)
Ankoatra ny mazava ho azy fiambenana , mimonomonona sy manaikitra, alika maro no mampiseho fihetsika manjaka isan-karazany izay mazàna tsy fantatry ny olombelona. Ny alika dia tena mahalana no mampiseho ny haavon'ny fanapahana ambony indrindra amin'ny alina. Matetika dia misy ireo famantarana mitondra mankany aminy mandritra ny taona maro ary ny alika alfa manjaka dia tsy mimenomenona sy manaikitra foana. Raha omen'ny tompony izay tadiaviny ny alika, indraindray dia tsy misy antony tokony himenomenona na hanaikitra ilay alika raha tsy hoe misy fanamby. Fantatry ny alika fa misy eo amin'ny tontolon'olombelona. Iza tokoa moa no manome sakafo sy manokatra varavarana handehanany vilany? Raha ny olona no manao ireo asa ireo amin'ny fangatahana alika, na izany aza, maninona no tsy mieritreritra ny alika fa izy no mpitondra? Mora ho an'ny alika ny mahazo ny fahatsapana fa alpha ao anaty fonosany izy ireo. Satria maro ny fihetsika alpha alika tsy ekena amin'ny fiarahamonina olombelona, ​​ohatra, manaikitra, zava-dehibe ho an'ny olombelona ny mitazona ny fitarihany ny alikany.
Ireto ambany ireto ny fihetsika mahazatra ananan'ny alika rehefa mino izy ireo fa ambonin'olombelona. Ataovy ao an-tsaina fa ny alika dia tsy mila mampiseho ireo fihetsika rehetra ireo mba hanana toe-tsaina manjaka. Indraindray ny alika alfa dia tsy haneho afa-tsy fihetsika vitsivitsy amin'ny fotoana tsy ampoizina, miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny alika fa toa atao amin'ny fotoana rehetra. Alika marani-tsaina dia mihaika ny mihantsy ny filaharany noho ny alika manan-tsaina salantsalany na ambany noho ny ambiny.
Headstrong sy fanahy iniana
Manosika kilalao ho ao aminao na manala lamba mba hahafahanao milalao amin'izy ireo
Manendy anao ho saka
Mipetraka amin'ny toerana avo, mijery ambany ny zava-drehetra
Miambina olona amin'ny olon-kafa manatona. Tian'ny olona ny miantso azy io hoe 'miaro' fa tena 'mitaky' - tompona anao ny alika.
Fanairana na fidradradradrana amin'ny olombelona izay heverin'ny tompona 'miresaka' (tsy misy baiko hanao izany).
Hiakiaka avo lenta ho fanoherana ny zavatra tsy tian'ny alika hatao.
Mitsambikina na mametraka ny tongony amin'ny olona (tsy misy baiko hanao izany).
Fikirizana momba ny eo amin'ny fanaka manokana rehefa angatahina hiala (alika ny azy)
Fikirizana amin'ny fidirana sy fivoahana eo am-baravarana alohan'ny olombelona
Fikirizana ny mandeha eo alohan'ny olombelona raha mbola mitarika
Fikirizana hamaky ny vavahady aloha
Mandà tsy handeha amin'ny firaka (manilika alika kely tsy alika, alika misy ratra na aretina)
Mitsentsitra ny ombelahin-tongotry ny olona rehefa lasa izy ireo (tsy navelan'ny alika handeha)
Tsy fihainoana baiko fantatra
Tsy tia olona mikasika ny sakafony
Mijoro ho reharehan'ny vatan'olombelona
Fikirizana momba ny eo an-tampony, na feny io na fanitsahana ny tongotrao
Fikirizana momba ny toerana fatoriana, izany hoe eo amin'ny ondana
Mahasosotra raha mikorontana rehefa matory
Tia matory eo ambonin'ny lehilahin'izy ireo
Milelaka (manome oroka) amin'ny fomba voafaritra sy mifantoka
Mitondra tena amin'ny fomba mandeha mirehareha, misandratra ny lohany
Tsy tia avela irery ary faly be loatra amin'ny fiverenan'olombelona (jereo Ny fanahiana amin'ny fisarahana amin'ny alika )
Ny mijery alika fotsiny sy ny fomba itondrany ny tenany dia afaka milaza aminao hoe ao anaty inona ny alika. Ohatra, ny alika manjaka dia handeha ambony sy mirehareha, manambony tena araka izay tratry ny heriny. Mitondra ny tenany ho toy ny fahamendrehana amin'ny mason'olombelona tsy voaofana izy. Entina mafy ny vatana, miakatra ny rambony ary henjana, mailo ny sofina.
Alika manoa, etsy ankilany, mitondra tena amin'ny fomba mifanohitra amin'izany. Mihazona ny lohany izy ireo, midina ny sorony, mandany ny rambony ary milatsaka kely kokoa. Raha ny mason'ny olona tsy voaofana dia toy ny alika manoa ny alika mampalahelo. Tsia, ny fiorenan'ireto alika manoa ireto dia milaza amin'ny manodidina azy fa tsy te-hanao fanamby na amin'iza na amin'iza izy ireo. Tonga soa aman-tsara izy ireo. Ny alika dia biby 'miady', izay midika fa ny fiarovan-tena voajanahary dia ny miady rehefa voarahona izy ireo. Izany no antony anaovan'izy ireo miharihary fa tsy te hiady na rehefa manao izany.
Satria ny alika manjaka dia toa mirehareha ary, tsy maintsy miaiky isika rehetra, mahafatifaty, raha tsy fantatrao izay tena ambaran'ilay alika, ary ireo alika manoa dia toa malahelo satria mitazona ny lohany izy ireo ary mihemotra, dia tsy mahagaga izany betsaka ny olona manana alika manjaka. Rehefa manaiky ny alik'izy ireo dia diso izany amin'ny alika mampalahelo. Rehefa mihetsika manjaka ny alik'izy ireo dia diso izany noho ny alika faly sy mirehareha. Manjaka ny mahazo valisoa.
Nimenomenona ity Labrador mavo ity ary nibolisatra tamina vehivavy iray. Ilay alika indray mandeha dia namandrika an-dRamatoa teo an-joron'ilay garazy mandra-pahatongan'ny tompony tonga ary niantso azy. Ny ankamaroan'ny olona dia mety mandiso ity fihetsika ity ho mahery setra mahery setra, fa raha mijery ny fitenin'ilay alika ianao dia ho hitanao fa hafa noho ny Chihuahua aseho etsy ambony. Milatsaka ny rambon'ny alika ary voafintina kely. Miverina ny sofina fa tsy mandroso. Mariho ny fomba itokisan'ny alika kely mankany aoriana, fa tsy handroso. Tsy matoky tena sy matahotra ity Labrador ity ary nianatra niatrika ireo fahatsapana ireo tamin'ny fihetsika mahery setra. Ity alika ity dia mety mbola hanaikitra olona noho ny tahotra, fa ny antony mahatonga ny fihetsiny dia tsy mitovy amin'ny alika manao herisetra noho ny fanapahana.
Emiliano, valo taona, dia 'mahafehy ny dia' Darley the Beagle mifangaro
Ny alika dia manana toe-tsaina mivezivezy ary voajanahary tarihin'ny mpitarika azy ireo. Ny fampianarana alika voditongotra amin'ny firaka no fomba tokana mahomby indrindra hifandraisana izay mpitarika ny kitaponao. Ny alika no faly indrindra rehefa afaka miantoka ny filaharany izy ireo. Ny olona no sambatra indrindra raha alika milamina sy manaja ny manodidina azy ny alikany. Rehefa avela handeha eo alohan'ny olombelona ny alika mandritra ny fitarihana, dia mampita amin'izy ireo fa ambonin'ilay olombelona izy ireo ao anaty filaminana. Rehefa tsy mazava ny filaharana entana dia miteraka fihenjanana sy fitaintainanana be alika. Voafehinao tamin'ny alikanao ve ny diany?
Alika kely kilalao / miakatra hatramin'ny 20 pounds (9 kg)
Alika antonony / eo anelanelan'ny 20-50 Pound (9-23 kg)
Alika lehibe / manomboka amin'ny 50-100 Pound (23-45 kg)
Alika lehibe fanampiny / afaka mihoatra ny 45 kilao (45 kg)
pit bull husky mix puppy
antsasaky coyote mpiandry hena alemanina
alika kely seter volamena retriever